Ụzọ na-na-aka na Spotify gụgharia
Part 1.Spotify Official njikọ
Spotify bụ a na-ewu ewu music gụgharia n'elu ikpo okwu na ya kere a aha ebe ya igba egbe na 2008. Ọ nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ na nnukwu nchekwa data nke music. Tinyere mgbasa nke music na Spotify, Frog nke a ngwa emewo. Ọtụtụ forums, ofufe peeji nke na enyemaka na-weebụsaịtị gbagote. Spotify agbasawo nile internet na otú nwere ya na-eso ụzọ, dijitalụ mbinye aka na web adị. Spotify nwere ịdị adị nta ọ bụla n'ihu ọha n'elu ikpo okwu. Ị nwere ike ịchọta Spotify on Facebook, Twitter, Tumblr, na ọbụna Google+. E nwere ọtụtụ ukara na onye jisiri iche iche na ndị a na netwọk.
Isiokwu a ga-ewebata ka ukara na ụfọdụ na-ewu ewu onye jisiri peeji nke na weebụsaịtị nke nwere ike na-enye aka na uru a nleta maka Spotify ọrụ.
1.Spotify Official njikọ
Ọ bụ nnọọ ewu ewu peeji na Facebook netwọk. Nke a na peeji nwere n'elu 7 nde ka na mgbe niile na-amụba. The peeji a na-emelite na e nwere ndị posts na ozi ọma na-azụ na a mgbe niile. Ọ bụ ukara App page. Ị nwere ike ịchọta ọhụrụ music mmelite, videos na ọba na peeji nke. Soro nọgidesie emelitere. Ịbụ akụkụ nke music mgbanwe na Spotify ma sonyere na peeji na-akwado.
Twitter ebe bụ maka ndị na-eso, na stats egosi n'ụzọ doro anya na e nwere ihe karịrị otu nde na-eso ụzọ n'ihi Spotify. Ị pụrụ ịgbaso akaụntụ, nọgidesie emelitere na tweet na ọtụtụ ndị ọzọ. Ị nwere ike ịnweta anatara na dị njikọ dị iche iche faịlụ ka inweta ihe kasị mma nke Spotify ego. Ị nwere ike ịkọrọ gị faịlụ, echiche na videos na peeji nke.
3. Google gbakwunyere: https://plus.google.com/+Spotify/videos
Nke a na peeji bụ ukara Google+ na akaụntụ maka Spotify. I nwere ike iso na ịkọrọ gị echiche, music anatara na kwa nọgidesie emelitere banyere eme nke music ụwa. The akaụntụ bụ nnọọ arụsi ọrụ ike na anabata. E nwere mgbe mmelite na ị na ha bụ ndị ọma na oge nke mere na unu maara ha n'otu ntabi dị ka ha na-eme.
Nke a bụ ukara obodo na peeji nke maka Spotify. I nwere ike iso mmelite, na-agụ isiokwu na itinye aka na chats na ibe na-eso ụzọ. Ọ bụ otu nkwụsị Ama oche na 'ihe niile banyere Spotify' page. E bụ 'newcomers ngalaba ebe ị pụrụ ịchọta nile bụ isi nkọwa maka Spotify. The 'Community blog' na-atụle niile ị chọrọ banyere music na Spotify. I nwekwara ike ịbụ akụkụ nke 'genre chat' na-atụle banyere ihe ọ bụla genre ma ọ bụ 'anya isiokwu chat' ịgwa ndị mmadụ okwu ọzọ karịa banyere music. Share na agbanweta ndepụta ọkpụkpọ gị na ọrụ na e nwere kwa ọnwa playlist votu ebe ị pụrụ votu maka gị ọkacha mmasị. I nwekwara ike na-agụ posts dị iche iche isiokwu ma ọ bụ okwu ihu site ọrụ ma na-atụle ngwọta maka nsogbu ndị ahụ.
Soro Spotify on Tumblr ma nọgidesie emelitere na ọhụrụ ozi ọma na netwọk. Ị nwere ike ịkọrọ gị playlist, eso ndị ọzọ na-ege ntị ma na-njikọ maka ndị ọhụrụ music tracks. Ọ bụ ihe niile i nwere ike ime Tumblr.
N'akụkụ ndị a ukara peeji nke, ị enwere anya n'ihi na ihe ndị ọzọ. Ị gaghị ahụ niile Spotify hụrụ na-ekwu okwu na-ekere òkè na otu peeji. Ma ị pụrụ ịchọta niile mmelite na ozi ọma na ha. Ọ bụrụ na ị dị njikere ịmatakwu banyere Spotify na ndị, ị nwere ike ịga ndị ọrụ kere blọọgụ ma na-ọma-azụ banyere music na Spotify.
Life hacker bụ ọmarịcha blog na saịtị, ebe i nwere ike na-eso ọhụrụ na ọnọdụ, maara banyere ịghọta nke ọ bụla isiokwu nke ụka. N'okpuru Spotify mkpado, ị ga-ahụ mmelite na ngwa nsụgharị, listi ọkpụkpọ, ozi ọma na ihe ndị ọzọ. Isiokwu dị ka 'Olee otú naghachi ehichapụ listi ọkpụkpọ' ma ọ bụ 'na ndepụta nke n'elu 5 gụgharia ọrụ' nwere ike ịbụ ụlọ ndò bara uru na ihe ọmụma n'ihi na-agụ. I nwekwara ike ga-esi mara banyere Ụzọ mkpirisi na Atụmatụ na usoro iji ngwa.
Spotifyartists a mma-deere saịtị. The ngalaba na-categorized na taabụ dị ka 'Spotify kọwara', 'blog' na ọtụtụ ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọta ihe niile nkọwa mkpa ka ị mara banyere Spotify. E nwere enyemaka nduzi na-mfe gị ahụmịhe na Spotify. Gụọ isiokwu site blọgụ nọgidesie emelitere banyere ndị ọhụrụ na ọnọdụ na ozi ọma banyere music ụwa na-eme nke Spotify. I nwekwara ike ịhụ ozi ọma na-azụ banyere nka na ha onyinye na mgbe niile.
Last.fm jikọrọ a blog ọrụ kemgbe na-arụsi ọrụ ụka ụlọ maka Spotify ndị hụrụ. Ị nwere ike ịhụ ọtụtụ eri na-ekwu banyere na isiokwu metụtara Spotify. E nwere isiokwu dị ka 'otú iji Spotify Scroobler', ma ọ bụ okwu dị ka 'ihichapụ egwu si listi ọkpụkpọ mkpọka'. N'ihi ya ebe i nwere ike ịchọta ihe ngwọta nsogbu na nwekwara biputere eri na-amalite ọhụrụ mkparịta ụka.
Pansentient bụ a blog na saịtị na mmelite ozi na a mgbe niile. Ị mkpa ọmụma, nke a nwere ike ịbụ gị tụkwasịrị obi ntụpọ. E nwere iche iche ngalaba maka Spotify. Get reviews, na-ekwu, blọọgụ, dee gbasie na ụfọdụ isiokwu nke nneme na ndị ọzọ, ndị niile na Pansentient. E nwere playlist dị maka na-ege ntị nke ị pụrụ iso na-enwe ụbọchị gị. Isiokwu bụ ihe ọmụma na-adọrọ mmasị.
E nwere ndepụta nke ụka forums nakwa ebe ị pụrụ ịchọta niile nkọwa na azịza gị na gbara ajụjụ
> Resource> Spotify> Ụzọ Buru Touch na Spotify gụgharia